Mechie ọnụ ma kpachapụ anya Nnukwu Ozi ?! | Martech Zone
Mechie ọnụ ma kpachapụ anya Nnukwu Ozi ?!
Fraịde, Ọgọstụ 15, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Nke a bụ karịa ajụjụ maka mkparịta ụka kama ịza ajụjụ. Ahụmahụ m na ịde blọgụ bụ na agbanwe agbanwe bụ ihe niile. Ọ bụrụ na ndị na - agụ akwụkwọ gị na - atụ anya ịnweta ọdịnaya ọhụrụ kwa ụbọchị, ha ga - alaghachi na saịtị gị kwa ụbọchị iji nweta ọdịnaya ahụ. Ajuju di nma bu:
Ugboro ole ka onye ọbịa ga-alaghachi na weebụsaịtị gị iji chọpụta ọdịnaya ọhụrụ tupu ha amalite Kwụsị nloghachi?
Anọ m na-eme ụfọdụ ule na nso nso a. Ọ bụghị usoro mmụta sayensị ka m were, mana mgbe m dere a blog post na Starbucks nke natara otutu nlebara anya (A), ekpebiri m Hapụ ya ka ọ gafere iji hụ ihe ga-eme.
Otu ihe na-adọrọ mmasị bụ na post a ma ama maka ihe dịka 72 awa (B) mgbe edere ya. Ọ dị ka ọ ga - ewe otu ụbọchị maka ndị folks iji gbarie ọdịnaya ahụ ma ụbọchị ọzọ iji zaghachi ma dee banyere ya na blọọgụ ha. Nke a, n'aka nke ya, weghachitere okporo ụzọ na saịtị m ụbọchị nke abụọ. Site na ụbọchị nke atọ (C), ọ bụ ezie na uche ha agwụla ma blọọgụ laghachiri na ọkwa nkịtị nke ndị ọbịa kwa ụbọchị (ọ bụghị gụnyere ndị debanyere aha RSS RSS).
Eziokwu ahụ bụ na blog laghachiri na ọkwa nkịtị (ruo mgbe Na-ege ntị na Calculator mpụta mbụ) na-egosi m na Digg or Tụrụ Ugwu okporo ụzọ, ezie na-agba ume, ọ bụchaghị okporo ụzọ nke m na-eso. Ndị a bụ ezigbo ndị surfers - na-achọta ọdịnaya na-atọ ụtọ n’ebe ahụ mana ha anaghị alọghachi maka ndị ọzọ. M na-eso ndị folks laghachi - ndị na-akwụ ụgwọ ndepụta m, na-eleta oge niile, ma na-ekere òkè na mkparịta ụka m tinyere ebe a.
Na ọnọdụ mgbasa ozi na-ahụkarị, agara m ekwe ka uzu ahụ gaa n'ihu tupu iwe ya na ọkwa ọhụrụ na isiokwu ọhụrụ. Agaara m anọgide na-anwa 'ịnyagharị ebili ahụ', ikekwe ọbụna na-aga n'ihu mkparịta ụka ahụ na 2 ma ọ bụ 3 ọzọ posts. Ọ bụ ezie na nke ahụ nwere ike nyere aka ịnọgide na-enwe ọnụ ọgụgụ nke (B) nwa oge ndị ọbịa hụrụ m 48 ka 72 awa mgbe post gasịrị, ekpebiri m na m ga-aga n'ihu na-eziga kwa ụbọchị - maka m isi ndị na-agụ (C) ndị na-aga n'ihu na blọgụ m.
Ọ dị mfe ijigide ndị na-agụ akwụkwọ karịa ka ọ dị iji nweta ndị ọhụrụ. Iwuli na diggwagon ahụ dị ka isi na marathon na-agba ọsọ. Marathon na-ewuli ọgụgụ isi, na-agagharị ma na-ama ụma, na-ezute atụmanya nke ndị debanyere aha gị. The Sprint bụ ihe na-agwụ ike na-achọ ime ka ndị ọzọ votu gị, na-ede njikọ njikọta, ma na-anwa ịkọkọ ọnụ ọgụgụ ọhụrụ nke ndị na-agụ nwa oge kwa ụbọchị. I nwere ike ime ya, mana ejighi m n’aka na ị ga-enwe ike ịgba ọsọ ahụ ma ọ bụ na ị gaghị eme.
Tags: Analyticsaghọ aghụghọhackedkpalirinyocha pinterestpinterest nkwalite
Nzọụkwụ 3 iji kpuchido Blog gị site na Nnukwu Iwu Abụba
Aug 15, 2008 na 10: 24 AM
Echere m na ị jiri ihe a pịa ntu ahụ n’isi. Ọ nwere ike ịdị mma maka nnukwu ụlọ ọrụ mgbasa ozi ma ọ bụ òtù dị iche iche ịnọdụ ala na ihe ịga nke ọma tupu ha agaa nzọụkwụ ọzọ ha, mana maka blọọgụ ọ bụla, ọ ga-aba uru karịa ịrapara na iwepụta akwụkwọ ugboro ugboro ma baa uru iji lebara ndị na-ege ntị anya anya. N'ezie flash mgbe ụfọdụ na pan diggers ma ọ bụ sụọ ngọngọ bụ ezi ụzọ iji tọghata ha regulars.
Enweela m posts ole na ole na-ewu ewu na blọọgụ m, mana nlebara anya ga-anwụ mgbe niile mgbe otu izu gachara ma ọ bụ na nleta ndị na-agbanwe mgbe niile.
Echere m na ide ọdịnaya ejiri digg / ụtọ / sụọ ngọngọ kwa izu ole na ole dị oke mkpa iji mee ka ndị ọhụụ chọpụta saịtị gị. Ya mere, ya marathon kwa ụbọchị, ma Sprint na ngwụsị izu 🙂
Onye Na-anụ Uchu
Aug 16, 2008 na 6: 49 AM
Nchọpụta dị ebube na nsogbu ndị na-eme ka blog / saịtị na-aga n'ihu. Nwere olileanya ịhụ gị gburugburu na agwa.
Sep 4, 2008 na 5:00 PM
Achọpụtala m otu akara a nke oge 48 ruo 72 ma gbalịa ịbawanye ya site na ngwakọ ngwakọ nke ịlaghachi na ọkwa a ma ama mana ka na-enye nri ndị bara uru n'ime kwụ n'ahịrị maka ndị na-achịkwa. Olileanya bụ na ikwughachi ihe ọhụrụ ahụ ga-eme ka ndị ọhụrụ ahụ nwee ogologo oge iji mata ogo nke ego ụgbọ ala. Agụmagụ m pere mpe mana kemgbe m bidoro usoro a, emeela m ka ndị na - agụ akwụkwọ m belata (ụbọchị iri ga - agagharị) ihe dị ka 25% karịa ọnwa anọ gara aga.